Reer Buuhoodle oo Dibadbax ku taageeray M/weynaha Cusub ee Somalia (Sawiro). – Radio Daljir
Reer Buuhoodle oo Dibadbax ku taageeray M/weynaha Cusub ee Somalia (Sawiro).
Seteembar 12, 2012 2:58 g 0
Buuhoodle?Sept, 12?Dadweynaha ku dhaqan magaalada Buuhoodle ee gobolka Cayn ayaa maanta dibadbax balaadhan ku taageeray M/weynaha Cusub ee Jamhuuriyada Federalka Somalia Md Xasan Sh Maxamuud oo dhowaan xildhibaanadda baarlamaanka Somalia u doorteen hogaamiyaha dalka afarta sano ee soo socota.
Boqolaal kamid ah bulshada Buuhoodle oo wata gaadiidka noocyadiisa kala duwan, ayaa soo maray wadooyinka magaaladda iyagoo ruxayey Boorar ay ku xardhan yihiin ereyo lagu taageerayo Madaxweynaha cusub.
Dibadbaxayaashu waxay isugu yimaadeen Isbartiimada magaalada Buuhoodle, waxaana halkaasi ka hadlay, Cuqaal, Aqoon yahano, Masuuliyiin, Ururada Haweenka, kuwa dhalinyarada, Masuuliyiin, iyo xubno kale oo ka socdey qaybaha kala duwan ee Bulshada.
Dadkii halkaasi ka hadlay ayaa dhamaantood taageeray M/weyne Xasan Sh Maxamuud, iyagoo siweyn u dardaarmay inuu dadka iyo dalka Somalia ugu shaqeeyo Sinaan iyo Cadaalad.
Tartan loogu tala galay is-dhex galka dhalinyarada koonfurta iyo waqooyiga Gaalkacyo oo maanta ka furmay garoonka Cawaale. Tartan loogu tala galay is-dhex galka dhalinyarada koonfurta iyo waqooyiga Gaalkacyo oo maanta ka furmay garoonka Cawaale.
Bannaanbax lagu taageerayo madaxwayne Xassan Sh. Maxamuud oo ka dhacay degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud. (Daawo Sawiro)